Mabhatiri nemabhatiri, dambudziko rezvakatipoteredza | Bezzia
Mabhatiri nemabhatiri, dambudziko rezvakatipoteredza
Maria vazquez | 20/11/2021 10:00 | Nhau
Isu tinoshandisa mabhatiri zuva nezuva. Vanoshandisa midziyo inoita kuti hupenyu hwedu huve nyore kana kuti huve nyore, dzakadai senharembozha, mabhurashi emagetsi emagetsi, zvibatsiro zvekunzwa, zviyero zvekicheni, zvigadziriso zviri kure ... Asi, isu hatisi nguva dzose tichiziva dambudziko rezvakatipoteredza ravanomiririra.
Vazhinji vedu hatizivi kukura kwengozi yemabhatiri nemaseru mumhoteredzo. Kunyanya ekupedzisira, sezvo mabhatiri ane hunhu hwekukwanisa kukwizwa nguva nenguva, mabhatiri anoraswa kana achinge aburitsa simba raakagadzirirwa nekuda kwekuparara kwezvikamu zvaanenge agadzirwa. Zvinhu zvine chepfu kune hutano uye zvinokuvadza zvakatipoteredza.
1 Matambudziko ezvakatipoteredza
2 Mashandisirwo azvo
3 Mutoro wega wega
Mabhatiri, sezvimwe zvigadzirwa zvemagetsi zvakafanana, semabhatiri kana accumulators, zvine simbi uye makemikari ane chepfu. Mercury, cadmium, nickel kana lead, zvinowanzoitika mumaseru nemabhatiri, zvine njodzi kuhutano, uye zvinogona kukonzera huwandu hwemamiriro ezvinhu nezvirwere muvanhu, asiwo zvinokuvadza kune zvakatipoteredza kana zvikasarapwa zvakanaka.
Iye a kurapwa zvisina kunaka kwemabhatiri uye mabhatiri kana hupenyu hwawo hunobatsira hwapera anomiririra dambudziko kune zvakatipoteredza. Sei? Nekuti idzi dzinotambura nekuora kwezvimedu zvadzo zvakakanganisika mukati nezvikamu zvadzo uye nekunze nekuita kwemamiriro ekunze uye nekuvirisa kwemarara, kunyanya organic zvinhu, izvo zvinosimudza tembiricha yayo ichiita sechinhu chinosvibisa. Uye ndezvekuti nekusavarasa mumudziyo chaiwo, vanopedzisira vapinda mumarara.
Ndiwo maitiro simbi dzinorema dzinopedzisira dzanyura muvhu, muzvikamu zvemvura zviri pasi pevhu, munzizi nemakungwa zvinosvibisa marudzi ose ezvinomera nemhuka. Chekupedzisira, vanotorwa nevanhu vachikonzera kukuvadzwa kwenguva pfupi, yepakati uye kwenguva refu.
Kufungidzira ukuru hwekusvibiswa kwemabhatiri aya anoraswa sekunge angori imwe tsvina, zvakakwana kuziva kuti ndiwo anokonzera 93% yeMercury mu marara emumba, pamwe ne47% yeZinc, 48% yeCadmium, 22% yeNickel, nezvimwe.
Kusadzokorodza maseru nemabhatiri akashandiswa zvine chekuita nenharaunda. Kwete chete nekuti ivo vanoburitsa makomisheni anopedzisira asvibisa ivhu neaquifers, asiwo nekuti haagone kudzoserwa uye. pindazve muchikamu chinobereka iyo mbishi zvinhu zvavanogadzirwa nazvo, zviri kuramba zvichishomeka uye zvinonyanya kukosha.
Sevagari tine basa rekugadzirisazve mabhatiri aya uye mikana yakasiyana yekuita kudaro. Kuunganidzwa kunongedza maseru nemabhatiri vanowedzera kuwanda. Ivo vanogona kuwanikwa munzvimbo dzakachena, zvakare mumigwagwa yemaguta edu, muzvitoro zvikuru uye muhoro dzemataundi uye zvimwe zvivakwa zveKutonga.
Iwe hauzive kuti padhuze yekuunganidza nzvimbo iripi? Unogona kuzvitarisa kuTown Hall yako kana muEcopilas, chikuva chekutungamira chekuunganidzira tsvina iyi inokufambisa iwe nekuisa yako kero muinjini yekutsvaga. nzvimbo dzekuunganidza dziri pedyo.
Aya akajairwa mapoinzi ekuunganidza anokumbira kana zvichidikanwa kubvisa, kutsiva kana kuburitsa midziyo. Uye tsvina inotakurwa kuenda kuronga, kurapa nekudzokorodza zvirimwa iyo inovimbisa kutevedzera Royal Decree 106/2008.
Mutoro wega wega
Pamusoro pekuzadzisa basa re isa mabhatiri aya panzvimbo dzekuunganidza Nokuda kwokuwedzera kurapwa, tingaita chimwe chinhu here kudzivisa kuparira ichi chinetso chemhoteredzo? Zvechokwadi, pakati pevamwe ...
Shandisa zvigadzirwa zvinoshanda nesimba rezuva, zvakanyanya kuwanda pamusika.
Sarudza zvinhu zvinogona kubatanidzwa kune network yemagetsi; zvakanyanya kushanda, kuwedzera, kubva pane simba rekuona.
Panyaya yekushandisa mabhatiri, sarudza mabhatiri anochajiswa, sezvo imwe yeiyi inogona kutsiva mazana matatu anoraswa.
Kusaziva kunoreva kuti dzimwe nguva hatizive njodzi yezvakatipoteredza yezvimwe zvigadzirwa. Mashandisiro aunoashandisa anochinja here paunovaziva?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Nhau » Mabhatiri nemabhatiri, dambudziko rezvakatipoteredza
Zvinhu zvinonyanya kukosha kuita musati makuseni
Bet pagirazi globe marambi kuvhenekera imba yekutandarira